Home Wararka MW Maraykanka oo qof Soomaali ah xil sare uga magacaabay dowladiisa
MW Maraykanka oo qof Soomaali ah xil sare uga magacaabay dowladiisa
Xamse Warfaa oo ahaa gudoomiye ku xigeenka waaxda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden wuxuu u magacaabay lataliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka.
Masuulkaan ayaa waxa uu ku biirayaa Xafiiska Dadweynaha, Qaxootiga, iyo Socdaalka, oo ah xafiis Wasaaradda Arrimaha Dibadda u qaabilsan ilaalinta dadka barakacay. Xafiiskan ayaa sidoo kale kula taliya madaxweynaha go’aaminta tirada qaxootiga uu Maraykanku aqbali doono sanad gudihiis.
Previous articleUrurka Al Shabaab oo dagaal culus kula wareegtay Degaanka Qalimoow
Next articleFarmaajo oo ka been sheegay xaalada dalka ku jiro, rabayna inuu muujiyo awood (Faallo)
Gudoomiyihii hore ee Bangiga Dh. oo ka digay in laga horyimaado...
Waare oo lagula heshiiyay in la siiyo $1.7 Milyan oo ah...